Kuvhima uye Kubira hove | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rubric: Hunting and Fishing
Ndiudzei kuti chando chei chiri nani kutora norfin zvakanyanya 2 kana 3 uye nei zvimwe kunze kwemutengo?
Ndiudzei kuti chando chei chiri nani kutora norfin zvakanyanya 2 kana 3 uye nei zvimwe kunze kwemutengo? Kana zvichidikanwa, ndinopedza zvombo zvangu kubva kune izvo. Zvimwe zvinobatsira uye zviri nyore. Asi kana ...
Icho chikwata chichave chakabudirira chakabatwa nebheya iri kure ne60. 30x06 kana 12 cal.
Icho chikwata chichave chakabudirira chakabatwa nebheya iri kure ne60. 30x06 kana 12 cal. Verenga pano: Zvombo uye zvombo zvebheyo Blum M. Library Hunting pasina ... Kubva kutengeswa ...
Ndekupi kwandinokwanisa kutarisa zvombo zvokuvhima muMoscow?
Ndekupi kwandinokwanisa kutarisa zvombo zvokuvhima muMoscow? Iwindo rinogona kuvhurwa. Pano pane mamwe mashoko ari http: //talks.guns.ru/forum/44/68025.html kurongeka, mafoni, kuchinja, mapepa. On Kutuzovskiy on moving targets with blue flashing lights. Iye zvino ...
Chii chiri nani pakutsvaira, mutsara wakagadzirwa kana tambo?
Chii chiri nani pakutsvaira, mutsara wakagadzirwa kana tambo? Zvakaoma kutaura kuti chii chiri nani, usaenzanisa x. . nekutakura tami, zvinhu zvose zvine chinangwa chayo. Kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchibata grey
Dzidzisa nzira yekupinza chikepe PVC
Dzidzisa nzira yekuisa PVC muchikepe zvakanaka. Pump mubhodhi rekudzorera uye uzvidzivirire mhepo, uye mabhazi ose anotanga kukotamisa bhodhi rekutengesa kutanga. Hungu, zviri nyore, sezvizvi tinounganidza mumasekondi e25 ...
Inorambidzwa kubata nekape
Inorambidzwa kubata nekape zvakarambidzwa zvakarambidzwa! Kunyange zvazvo tecle uye zviduku muhukuru, asi zvinotora. Uchishandisa echo sounder uye chikepe hausi kusiya hove mukana wekuponeswa. Uyu hausi mumiririri! On ...
Chii chinonzi clutch uye sei chingaisimudza ???
Chii chinonzi kukakavara clutch uye maitiro ekugadzirisa ayo ??? Yekupokana clutch kubhurwa kwegubhu (spool) ye inertialess coil. Iyo inogadziriswa zvinoenderana nesimba retauro wehove uye tsvimbo. Pano, mune rumwe ruzivo: http://www.youtube.com/watch?v=9VhDaiY5jS4 / Tarisa pamusoro Iye ...
Ndeupi rudzi rwehonye mutsvuku muhove?
Ndeupi rudzi rwehonye mutsvuku muhove? Ndichawedzera pane mhinduro FISHERMAN =)) kana minye iri mumisungo, zvino iyi phylometrosis, worm Philimetry. Kune vanhu, njodzi haisi, asi inoparadza mharidzo yehove uye ...
Pfuti mvumo. kune zviyero zvakaenzana kumunhu wese .. Tsvaga kukamba yemapurisa - kune vanhu vakagoverwa izvi .. Hongu, maitiro acho akafanana nekuwana rezinesi rekusheedzera .......
pasi pebhadharo kutora gungwa uye nekuberekera hove ... ndiro mutambo unobatsira kenduru?
rova dziva uye simudza hove ... mutambo wacho wakakodzera kenduru here? Ehe zvinofanirwa nazvo. Iwe chete unofanirwa kugara pedyo negungwa iro uye woisa mari yakawanda, yakawanda basa uye nenguva, kuitira kuti hove yacho yaibatsirwewo !! ..
Nzira yekuita sei chikwata chekudzivirira chekuvhima ??
Nzira yekuita sei chikwata chekudzivirira chekuvhima ?? Ingoenda kuchitoro uye utenge. Hazvina mari yakawanda.Kana iwe usingazivi kuti ungazviita sei uye kwete iwe rarinha haisi kuonekwa, hapana anoziva ane ruzivo ...
Kusvika kwenguva yakareba sei kunopera?
Kusvika kwenguva yakareba sei kunopera? Verenga mamwe mazano akachenjera. Kunyanya avo ichthyologists vanozvinyorazve mamwe mashoko, uye vakaona cruciri chete muhuduku (uye izvo hazvisi zvose).
Blowback system. Mukuwedzera pakufananidza kubviswa kwevharivha, system blockback inobvumira kuti mamiriro ekugadzirisa aite basa paanenge achidzidzira pakarepo mumushandisi wemuchina PPA-K (iyo yakafanana neCedar machine), iyo inotengeswa nehini inotyisa. Ndiine furo chikamu ...
Chii chinokanganisa, mubhedha, mupumburu, scythes
Chii chinokanganisa, mubhedha, mupumburu, masikiti kuchikoro, chimwe chinhu chakataurwa pamusoro pacho, chakakanganwa Zvichienderana nechinguva nemamiriro emamiriro okunze, pike perch inogona kubatwa mune imwe yenzvimbo dzakanyorwa ....
zvinyorwa kana mvumo yebhobho rerabhu ine motokari
zvinyorwa kana mvumo kuti rabha chikepe motor Kana chikepe pacharo anoyera asingasviki 200 makirogiramu uye injini hakufaniri zvishoma pane 10 bhiza-kunyoresa, Kodzero DIC pamusoro 5 bhiza utariri ...
Mubvunzo kune vanhu vane ruzivo, pfuti yepumumati inouraya munhu here?
Mubvunzo kune vanhu vane ruzivo, pfuti inogona kuuraya munhu here? Pneumatics inogona kuuraya munhu chaizvo! Kunyora kwaunoda kupfura .... kana akaurayiwa pahuma) ichi chiri WEAPON. Chii? Rudzii rwepneumatics? Iyo jamb inogona kuuraya ...
chii chiri nani kupfuura hatsan 125 kana gamo hunter 1250? pneumatic gun
chii chiri nani kupfuura hatsan 125 kana gamo hunter 1250? pneumatic shotgun Zvechokwadi hatsan 125 kana iwe iwe simba rinokosha uye mutengo wakanaka, asi gamo hunter 1250 yakaitwa nematanda uye izvi ...
Ndeipi nzira yakanakisisa yekuita banga? Ndezvipi zviri nyore, zvakakurumidza kana zvisingabhadhari kuita maitiro ekubata?
Ndeipi nzira yakanakisisa yekuita banga? Ndezvipi zviri nyore, zvakakurumidza kana zvisingabhadhari kuita maitiro ekubata? Ini ndiri kubva kurunyanga rwenondo, ndakagadzira nyanga kubva panyanga ... Unobirisa chikamu chakakodzera chemaminitsi epanyanga ...
Mubvunzo kune vanotora mushwa: Ko fox vygle uye ane mapatya ane uturu sei?
Mushroom Mubvunzo: gava sei vygledit uye kana ane chepfu mapatya? Chanterelle Science klassifikatsiyaTsarstvo: GribyOtdel: BazidiomitsetyKlass: BasidiomycetesPodklass: AgaricomycetidaePoryadok: LisichkovyeSemeystvo: LisichkovyeRod: LisichkaVid: chanterelle Latin nazvanieCantharellus cibarius Fr. ...
Ndapota tiudzei mitsara yemutambo wekuRussia Fishing 3.0
Ndokumbira ndiudze macode emutambo Russian Fishing 3.0 Game Russian Fishing - ongororo yemutambo, kupfuura, chigamba, makodhi, cheat, pc ... Ruzivo nezvemutambo Russian Fishing pc, macode, previews, ongorora, mutambo wenhau, ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,458 masekondi.